Abesifazane abangena menopause babé kukhethwa ukuthi ukuthatha imithi ekhethekile ngesikhathi umvuthwandaba ezizosekela umzimba, noma kangcono hhayi ukugxambukela izinqubo zemvelo.
imithi yesimanje, Nokho, it is kakhulu Kunconywa ukuthatha imithi ukuthi usize ekusekeleni umzimba phakathi nalesi sikhathi esinzima. Owesifazana ngemithi uyozizwa ungcono kakhulu. Lezi zidakamizwa ziye zitholakale, abe ububanzi lebanga lentengo kanye ithengiswe ngasiphi ekhemisi, ngakho bekwazi ngayinye ubulili fair. Owesifazane ufuna ukuhlala abasha eside, lowomuntu kumuntu kumele kudingeke yokusebenzisa le mithi.
Ikhambi elingcono kakhulu le menopause - amalungiselelo esekelwe isitshalo ezikhishwe ngokuthi phytoestrogens. Lokhu izinto zemvelo ezikhishwe izitshalo futhi senze njengendlela esikhundleni i-hormone zesifazane. Phytoestrogens ukunqamuka kokuya esikhathini ngaphambi ziphephile ngokuphelele, ngoba akuyona izinto hormone, abasephuli amahomoni engazinzile kakade, futhi izakhiwo zayo zemvelo ngisho ngcono. On yokwamukela ukwakhiwa okunjalo egcinwe umzimba efanele, ama-hormone olinganiselayo, futhi ngenxa yalokho, kuba yini esindayo kangaka nezimpawu menopause kuyiphi ikakhulu futhi sithinta abesifazane. Amalungiselelo ukuya esikhathini nge phytoestrogens kungaba ngokuphawulekayo alibale inqubo isikhumba ukuguga, ngaphezu, reception yabo iyathuthuka isimo esingokomzwelo owesifazane, akukho ukucindezeleka, ukunganakwa, ukwethuka. Isici esiphawulekayo izidakamizwa ezifana siwukuthi bangamalungu okulula ukuyiphatha. Okuwukuphela ukungabekezeleli ngabanye kwanoma iyiphi ingxenyana.
Amalungiselelo ukunqamuka kokuya esikhathini ngaphambi aqukethe izakhi ezahlukene, ngakho-ke kungcono ukukhetha ngemva kokubonisana udokotela wezifo zabesifazane, okuyinto esekelwe izikhalazo eqoqwe linqume imithi, ephumelela kunazo kunoma isiphi isimo esithile. The main kugxilwa ukuqinisekisa ukuthi ukulungiselela iqukethe phytoestrogens eziningana ezahlukene, okukuvumela umthelela eziyinkimbinkimbi inkinga. Eyesibili iphuzu - isikhathi i-reception. Njengoba umvuthwandaba senzeka amagagasi, kungcono uvula ukusetshenziswa eside, ngakho-ke abalelwa ku-lwemithi ephephile isikhathi eside. Imikhiqizo edume kakhulu ukuya esikhathini - a "Remens", "Chi-Klim", "Estrovel", "Klimadinon".
"Remens" - izidakamizwa, Injongo ogama main - ekubuyiseleni ama-hormone ibhalansi. Ngenxa nemiphumela yako, Remens normalizes ukusebenza oxhumene ngxenye, pituitary futhi ezikhiqiza amaqanda. Ngemva ukwelashwa zinyamalale ukungakhululeki elihlobene ne ukushabalala insikazi umsebenzi zokuzala. umsebenzi ojwayelekile we inhliziyo, kuthuthukisa kwegazi. Umuthi itholakala amaphilisi kanye amathonsi. Inkambo yokwelashwa - izinyanga okungenani eziyisithupha.
"Chi-Klim" - umuthi kabani senzo okuhloswe ngalo ukuqeda nezifo zengqondo climacteric. Vegetable izindlela yakhiwa tsimitsifugi phytoestrogens. Kumele uthathe iphilisi elilodwa kabili ngosuku, mhlawumbe ngezikhathi zokudla noma ngokushesha ngemva kokuba. Inkambo yokwelashwa - izinyanga eziyisithupha, isandiso kungenzeka emva kokubonisana udokotela wakho.
"Estrovel" - okunye okukhulu amalungiselelo hormone. Ngaphezu phytoestrogens, leli thuluzi iqukethe ama-amino acid kanye amavithamini ukuthi ukusekela umzimba female phakathi menopause - ithonya ibhalansi hormone, ekuthuthukiseni ke, udambise ubuhlungu, inciphise cholesterol egazini. Udinga ukuthatha esinye isibhebhe sibonisa e ezinyangeni ezimbili ezizayo.
"Klimadinon" - protivoklimakterichesky kwezidakamizwa kunomphumela omuhle izinguquko ezikhiqiza amaqanda, isekela ukukhiqizwa estrogen lalo. Lokhu kuwukhulula izimpawu of nambili kuya kwabadala. Iyatholakala njengoba amaphilisi kanye amathonsi. Inkambo yokwelashwa - izinyanga ezintathu.
Yokusetshenziswa: "Neotabs" - magciwane
Analogs "clotrimazole": incazelo izidakamizwa, imiyalelo, Izimo, kanye nokubuyekeza
Smear indoda: ukuthi kuyini